myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles - Zimbabwe
Tuesday, 28 September 2021 06:24 PM
September 14, 2019 13:00 pm
September 13, 2019 14:30 pm
HARARE, Sept 13: Former Zimbabwean president Robert Mugabe will be buried at the National Heroes Acre monument in Harare on Sunday, Mugabe family spokesman Leo Mugabe told Reuters, rowing back from comments the family made a day earlier.
September 11, 2019 19:34 pm
HARARE, Sept 11: The body of Zimbabwe’s founder Robert Mugabe arrived at the country’s main airport on Wednesday, but his final resting place remained a source of mystery amid a dispute between some family members and the government.
September 8, 2019 17:06 pm
HARARE, Sept 8: Former Zimbabwe president Robert Mugabe is expected to be buried next Sunday, state media reported.
August 16, 2019 16:05 pm
July 15, 2019 14:50 pm
GENEVA, March 22: The number of people in Zimbabwe affected by a devastating cyclone and flooding has jumped to 200,000, with most of the damage occurring near the Mozambique border, the UN said Thursday.
March 18, 2019 20:00 pm
MOZAMBIQUE, March 18: A cyclone that ripped across Mozambique and Zimbabwe has killed at least 162 people with scores more missing and caused "massive and horrifying" destruction in the Mozambican city of Beira, authorities and the Red Cross said Monday.
March 16, 2019 15:51 pm
HARARE, March 16: At least 24 people have died in south eastern Zimbabwe as homes and bridges were swept away by a tropical storm, the country’s information ministry said on Saturday.
January 22, 2019 07:25 am
HARARE, Jan 22: Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa arrived in Harare late Monday after cutting short his fund-raising trip in order to address the country’s economic crisis and crackdown.
August 27, 2018 11:42 am
HARARE, Aug 27: Emmerson Mnangagwa was officially sworn in as president of Zimbabwe on Sunday after winning a bitterly contested election that marked the country's first vote since strongman Robert Mugabe was ousted from power.
Zimbabwe rips Nepali bowlers, puts 380 runs on board
March 4, 2018 17:10 pm
Mar 4, 2018: Nepal has received a target of 381 runs in their match against hosts Zimbabwe in the ICC World Cup Qualifiers at Bulawayo on Sunday.
March 4, 2018 13:42 pm
KATHMANDU, Mar 4: Nepal is bowling after losing the toss against hosts Zimbabwe in the ICC World Cup Qualifiers at Bulawayo on Sunday.
SLanka beats Zimbabwe by 4 wickets in test
July 18, 2017 16:05 pm
COLOMBO, Sri Lanka, July 18: Sri Lanka has beaten Zimbabwe by four wickets in the one-off test on Tuesday.
Zimbabwe interested in working with Nepal: Minister
KATHMANDU, March 27: Zimbabwe has shown interest to help Nepal for the development of micro, small and cottage industries.